KAOMININA BEANDRAREZINA : Efa manomboka ny fanamboarana ny EPP manara-penitra
Mitana ny fanamby napetrany ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina. Efa manomboka amin’izao fotoana izao ny fanamboarana EPP manara-penitra manerana ny Nosy. Anisany misitraka izany ny kaominina Beandrarezina. 25 novembre 2019
Tamin’ny volana oktobra lasa teo no napetraka tamin’ny fomba ofisialy ny vato fototra fananganana izany. Ahitana efitra 12 ity EPP vao haorina ity, misy rihana, birao ho an’ny mpampianatra, trano famakiam-boky ary kianja filalaovam-baolina sy toeram-pialam-boly.
Nidina tany an-toerana Ramatoa minisitra tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Notsipihiny nandritra izany fa zon’ny ankizy ny mianatra ary anjaran’ny minisitera sy ny ray aman-dreny ny fampidirana ny zaza an-tsekoly. Misitraka ny fahazoana fitaovam-pianarana avy amin’ny fitondram-panjakana koa ny mpianatra ao amin’ity kaominina ity. Mbola nanentana ny ray aman-dreny handefa ny zanany any an-tsekoly koa ny Minisitra ary nanamafy fa ny fampianarana no lalan-tokana hivoahana amin’ny fahantrana ka ampirisihina ny mpianatra hilofo amin’izany.